Radiator Isikhuthazo kolu loyilo savela kuThando loMculo. Izinto ezintathu zokufudumeza zidibeneyo, nganye ifana neqhosha elinye lePiyano, yenza ukubukeka okubonakala ngathi ikhibhodi yePiyano. Ubude beRadiator bunokwahluka, kuxhomekeka kwiimpawu kunye neziphakamiso zoMbane. Uluvo oluqinisekileyo
Izibane Zekhandlela I-Hermanas yintsapho yabakhandi beekhandlela. Banjengooodade abahlanu (hermanas) abalungele ukukunceda ukuba udale umoya opholileyo. Isibane ngasinye sinobude obahlukileyo, ukuze sibadibanise ndawonye uya kuba nakho ukulinganisa isiphumo sokukhanyiswa kwamakhandlela anobungakanani obahlukileyo ngokusebenzisa izibane eziqhelekileyo. Ezi zikhandlela zenziwe nge-beech eziguqulweyo. Bapeyintwa ngokwahlukeneyo imibala ekuvumela ukuba udale indibaniselwano yakho ukuze ikulungele indawo oyithandayo.
Indawo Yezorhwebo & Kwigumbi Lokulinda
Indawo Yezorhwebo & Kwigumbi Lokulinda Le projekthi ijoyina indlela entsha yokuyilwa kweenqwelo moya kwizikhululo zeenqwelo moya ehlabathini, ifaka iivenkile kunye neenkonzo ngaphakathi kwesiphelo kwaye yenze ukuba umntu odlulayo enze amava ngexesha lakhe. Umgaqo weNdlela yokuYila ngeSikhululo seenqwelomoya e-GREEN uquka indawo ye-greener kunye nexabiso elizinzileyo lexabiso loyilo, indawo yonke yendawo yentengiso ikhanyiswa lilanga lendalo ngokubulela kumboniso weglasi enkulu ejonge kumgaqo weenqwelo moya. I-VIP Lounge yayiyileyiyilo ye-organic kunye ne-vandardist yokuyila iseli engqondweni. I-facade ivumela ubumfihlo kwigumbi ngaphandle kokuthintela ukujonga ngaphandle.
Indlu Uyilo lwendlu luphuhliswe ngokuthe ngqo kwindawo kunye nendawo ekuyo. Ubume besakhiwo benziwe ukuba babonise umhlaba ojikeleze iinkuni kunye neekholamu ezikhutshelweyo ezimele ii-engile ezingagungqiyo zemithi yemithi kunye namasebe. Izandiso ezinkulu zeglasi zalisa izithuba phakathi kwesakhiwo kwaye zikuvumela ukuba uyithande imbonakalo yomhlaba kunye nokuseta ngokungathi uphawula phakathi kwesiqu kunye namasebe emithi. Ibhodi yemozulu emnyama yase-Kentish emnyama kunye emhlophe imele amagqabi asonga eso sakhiwo kwaye avale izithuba ngaphakathi.
Ukupakisha Ihempe Oku kupakishwa kwehembe kuzimisa ngokwako kwifomathi eqhelekileyo ngokungasebenzisi nayiphi na iplasitiki. Ukusetyenziswa komjelo wenkunkuma okhoyo kunye nenkqubo yokwenza, le mveliso ayisiyinto elula kakhulu yokuvelisa, kodwa ikwalula kakhulu ukuyilahla, ezona zinto ziphambili zenza into engeyiyo. Imveliso inokucinezelwa kuqala, kwaye emva koko ichongwe ngenkampani ngokubeka ecaleni ukusika kunye noshicilelo ukwenza imveliso eyodwa eyakhekayo kunye nokuziva ihluke kakhulu kwaye inomdla. I-Aesthetics kunye ne-interface yomsebenzisi zabanjwa ngokujonga nje phezulu njengokuzinza kwemveliso.
Radiator Izibane Zekhandlela Indawo Yezorhwebo & Kwigumbi Lokulinda Umgexo Kunye Ne-Brooch Indlu Ukupakisha Ihempe